Ama-Internet Ministries - Angobani amabandla kaKristu?
Ubani amasonto kaKristu?
Ngu: Batsell Barrett Baxter
Umlando we-Historical we-Restoration Movement
Omunye wabameli bokuqala bokubuyela e-New Testament Christianity, njengendlela yokuzuza ubunye kuwo wonke amakholwa kuKristu, kwakunguJames O'Kelly weSonto leMethodist Episcopal. Ngo-1793 wasuka emhlanganweni wesonto lakhe waseBaltimore futhi wabiza abanye ukuba bajoyine ekutheni iBhayibheli liyiqiniso kuphela. Ithonya lakhe lazizwa kakhulu eVirginia naseNorth Carolina lapho umlando urekhoda ukuthi abaxhumana nabanye abayizinkulungwane eziyisikhombisa balandela ubuholi bakhe ekubuyiseleni ebuKristwini beTestamente entsha.
Ngo-1802 ukunyakaza okufanayo phakathi kwamaBaptist eNew England kwaholwa ngu-Abner Jones no-Elias Smith. Babekhathazekile "ngamazwi nezinkolelo zamahlelo" futhi banquma ukugqoka kuphela igama elithi umKristu, ukuthatha iBhayibheli njengesiqondiso sabo kuphela. E-1804, esendaweni esentshonalanga yezwe laseKentucky, uBarton W. Stone nabanye abashumayeli abaningana basePresbyterian bathatha isenzo esifanayo sokumemezela ukuthi bayothatha iBhayibheli "njengesiqondiso esiqinisekisiwe sezulu kuphela." UThomas Campbell, nendodana yakhe evelele, u-Alexander Campbell, bathatha izinyathelo ezifanayo ngonyaka we-1809 kulokho manje eseWest Virginia. Batshela ukuthi akukho lutho okufanele luboshwe kumaKristu njengendaba yemfundiso engeyona yakudala njengeTestamente Elisha. Nakuba lezi zintuthuko ezine zazizimele ngokuphelele ekuqaliseni kwazo ekugcineni zaba inhlangano eyodwa yokubuyisela eqinile ngenxa yenjongo yabo ejwayelekile kanye nesicelo. La madoda awazange asekele ukuqala kwesonto elisha, kodwa kunalokho abuyele esontweni likaKristu njengoba kuchazwe eBhayibhelini.
Amalungu esonto likaKristu awazicabangi ukuthi isonto elisha laqala ngasekuqaleni kwekhulu le-19th. Kunalokho, ukunyakaza konke kuklanyelwe ukuzala ezikhathini zesikhathi esontweni ekuqaleni okwasungulwa ngePhentekoste, AD 30. Amandla esikhalazo ahlala ekubuyiselweni kwesonto lokuqala likaKristu.
Ngokuyinhloko isicelo sokubumbana kwezenkolo okusekelwe eBhayibhelini. Ezweni lenkolo ehlukanisiwe kukholelwa ukuthi iBhayibheli yilo kuphela elivamile elivamile elivamile lapho abantu abaningi abesaba uNkulunkulu bezwe bangabumbana, uma kungenjalo. Lesi sikhalo sokubuyela emuva eBhayibhelini. Kuyisicelo sokukhuluma lapho iBhayibheli likhuluma nalapho lihlala khona lapho iBhayibheli lingathuli kuzo zonke izindaba eziphathelene nenkolo. Ibuye igcizelele ukuthi kukho konke okwenkolo kufanele kube khona "Itsho njalo iNkosi" kukho konke okwenziwe. Inhloso ubunye benkolo kuwo wonke amakholwa kuKristu. Isisekelo iTestamente Elisha. Indlela yokubuyiselwa kobuKristu beTestamente Elisha.
Ukulinganisa okwethembeke kakhulu kunohlu olubala ngaphezu kwamasonto e-15,000 ngamunye kaKristu. "I-Christian Herald," incwadi yenkolo evamile eyenza izibalo eziphathelene nawo onke amasonto, inquma ukuthi ubulungu obuphelele bamasonto kaKristu manje se-2,000,000. Kunabantu abangaphezu kuka-7000 abashumayela esidlangalaleni. Ubulungu besonto bukhulu kakhulu emazweni aseningizimu ye-United States, ikakhulukazi eTennessee naseTexas, nakuba amabandla akhona emazweni angamashumi ayisihlanu nakwamanye amazwe angaphezu kwamashumi ayisishiyagalombili. Ukwandiswa kwezithunywa zevangeli sekuye kwande kakhulu kusukela iMpi Yezwe yesibili eYurophu, e-Asia nase-Afrika. Abasebenzi abangaphezu kwe-450 besikhathi esigcwele basekelwa emazweni angaphandle. Amasonto kaKristu manje anamalungu amahlanu kaningi njengoba ayebikwa kwi-US Religious Census of 1936.
Ukulandela uhlelo lokuhlelwa olutholakala eTestamente Elisha, amasonto kaKristu azinzimela. Ukholo lwabo oluvamile eBhayibhelini nokunamathela ezimfundisweni zalo yizibopho eziyinhloko ezibopha ndawonye. Ayikho indlunkulu ephakathi yesonto, futhi akukho nhlangano ephakeme kunabanye bandla ngalinye lendawo. Amabandla abambisana ngokuzithandela ekusekeleni izintandane nabadala, ekushumayeleni ivangeli emasimini amasha, nakweminye imisebenzi efanayo.
Amalungu esonto likaKristu aqhuba amakolishi amane kanye nezikole zasesekondari, kanye nezintandane ezingamashumi ayisikhombisa nanhlanu namakhaya asebekhulile. Kukhona cishe amamagazini we-40 namanye ama-periodicals ashicilelwe amalungu ngamunye esonto. Uhlelo lomsakazo nethelevishini lonke, olubizwa ngokuthi "I-Herald of Truth" luxhaswe yiSonto le-Highland Avenue e-Abilene, eTexas. Isabelomali salo sonyaka se-$ 1,200,000 sinikelwe ngenkululeko yokuzikhethela ngamanye amabandla kaKristu. Uhlelo lomsakazo luzwakala okwamanje ngaphezu kweziteshi zomsakazo ze-800, ngenkathi uhlelo lwethelevishini luvele luvele ngaphezu kweziteshi ze-150. Omunye umzamo omkhulu womsakazo owaziwa ngokuthi "I-World Radio" unenethiwekhi yeziteshi ze-28 eBrazil kuphela, futhi isebenza ngokuphumelelayo e-United States nakwamanye amazwe angaphandle, futhi ikhiqizwa ngezilimi ze-14. Uhlelo olubanzi lokukhangisa kumamagazini kazwelonke ahamba phambili lwaqala ngoNovemba 1955.
Ayikho imihlangano, imihlangano yonyaka, noma izincwadi ezisemthethweni. "Isibopho esibopha" ubuqotho obuvamile ezimisweni zokubuyiselwa kobuKristu beTestamente Elisha.
Ebandleni ngalinye, eliye lahlala isikhathi eside ngokwanele ukuba lihlelwe ngokugcwele, kunabanye abadala noma abaphathi bama-presbyter abasebenza njengendikimba ebusayo. La madoda akhethiwe ngamabandla wendawo ngesisekelo seziqu ezisekelwe emibhalweni (1 Timothy 3: 1-8). Ukukhonza ngaphansi kwabadala bangamdikoni, othisha, nabashumayeli noma abafundisi. Abangenalo igunya abanalo noma abaphakeme kunabo abadala. Abadala bangabelusi noma ababonisi abakhonza ngaphansi kobunhloko bukaKristu ngokweTestamente Elisha, okuyinto enhle yomthethosisekelo. Ayikho igunya lomhlaba eliphakeme kunabanye besonto lendawo.
I-autographs yokuqala yezincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha ezakha iBhayibheli zibhekwa njengeziphefumulelwe ngokwaphezulu, okushiwo ukuthi zingenaphutha futhi zigunyaziwe. Ukubhekisela emibhalweni kwenziwa ekuxazululeni yonke imibuzo yenkolo. Isimemezelo esivela kulo mbhalo sibhekwa njengegama lokugcina. Incwadi eyisisekelo yesonto futhi isisekelo sabo bonke ukushumayela yiBhayibheli.
Yebo. Isitatimende ku-Isaya 7: I-14 ithathwa njengesiprofetho sokuzalwa kukaKristu. Izingxenye zeTestamente Elisha ezifana noMathewu 1: 20, 25, zamukelwa ngenani elibukeka njengezimemezelo zokuzalwa kwentombi. UKristu wamukelwa njengeNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, ehlanganisa ubuntu bakhe obuphelele nobuntu obuphelele.
Ngomqondo wokuthi uNkulunkulu ubikezela abalungileyo ukuba basindiswe phakade futhi abangalungile balahlekelwe phakade. Isitatimende somphostoli uPetru, "Ngiqinisile ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu akahloniphi abantu, kodwa ezizweni zonke omesabayo futhi enze ukulunga uyamukeleka kuye" (IzEnzo 10: 34-35.) Kuthathwa njengenhlangano ubufakazi bokuthi uNkulunkulu akavumelanga abantu ukuba basindiswe phakade noma balahlekelwe, kodwa ukuthi umuntu ngamunye uthola isiphetho sakhe.
Igama elibhapathiza livela egameni lesiGreki elithi "baptizo" futhi ngokwezwi nezwi lisho ukuthi, "ukucwilisa, ukucwilisa, ukuphonsa." Ngaphandle kwencazelo yangempela yegama, ukucwiliswa kwenziwa ngoba kwakuwumkhuba wesonto ngezikhathi zabaphostoli. Noma kunjalo, ukucwiliswa kuphela kuhambisana nencazelo yobhapathizo njengoba inikezwe ngumphostoli uPawulu kumaRoma 6: 3-5 lapho ekhuluma ngakho njengokungcwaba nokuvuswa.
Cha. Yilabo kuphela abaye bafinyelela "esikhathini sokuphendula" bayamukelwa ubhapathizo. Kukhonjiswa ukuthi izibonelo ezinikezwe eTestamenteni Elisha zihlala njalo kulabo abaye bezwa ivangeli lishunyayelwa futhi belikholwa. Ukholo kumele lube njalo ngaphambi kokubhapathizwa, ngakho labo kuphela abadala ngokwanele ukuqonda nokukholwa ivangeli kubhekwa njengezindaba ezifanele zokubhapathizwa.
Cha. Abefundisi noma abavangeli besonto abanalo igunya elikhethekile. Abagqoki isihloko sikaMhlonishwa noma uBaba, kodwa bakhulunywa nje ngegama elithi uMfowethu njengabo bonke abanye besonto. Kanye nabadala nabanye benza iseluleko futhi welule labo abafuna usizo.